အနှိပ်သေနတ် - ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘာအားသာချက်များ ရှိသလဲ။ Bezzia
Susana godoy | 10/01/2022 10:00 | လှပမှု
အနှိပ်သေနတ်သည် လူသုံးအများဆုံး ကိရိယာများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ နောက်ဆုံးအကြိမ်။ ယခင်က အားကစားသမားကောင်းများသာ အကျိုးကျေးဇူးရရှိခဲ့သည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါတွင် အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် အမှန်တကယ်ချိုသာသောစျေးနှုန်းများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင် တစ်လုံးရှိနေပြီဖြစ်ပြီး အနည်းငယ်မျှသာရှိသော ၎င်း၏အားသာချက်များမှ အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိနေပြီဖြစ်သည်။
သူ့ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ အားလုံးကို သိပါသလား။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အကူအညီတောင်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကြွက်သားများသက်သာခြင်း. ဒါပေမယ့် သင်သိထားသင့်တဲ့ အခြားသော အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီး ကျန်နေသေးတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဤနည်းဖြင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးမည့် သင်၏မဟာမိတ်အသစ်ဖြစ်လာမည်ကို သင်သိပါလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုခုကို လက်လွတ်မခံဘဲ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် သွားကြရအောင်။
1 ကြွက်သားများ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေသည်။
4 စာချုပ်များကို ဖယ်ရှားပါ။
5 ခန္ဓာကိုယ် လှုပ်ရှားမှုကို ကောင်းမွန်စေသည်။
6 သင့်ဘဝတွင် ပို၍ အပန်းဖြေပါ။
ကြွက်သားများ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေသည်။
အနှိပ်သေနတ်၏ ကြီးမားသော အကျိုးကျေးဇူးများထဲမှ တစ်ခုမှာ ၎င်းနှင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကြွက်သားပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို နှုတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်။. ကြွက်သားများ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အမျှင်ဓာတ်များ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာသောအခါ၊ ၎င်းနောက်တွင် ပြင်းထန်သော လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုလည်း ရှိသည်ဟု ဆိုပါမည်။ ဒါကြောင့် နာကျင်မှုက ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ပေါ်လာနိုင်ပြီး သေနတ်က ဖယ်ရှားနည်းကို ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ အဲဒါကို ကျော်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ ခံစားချက်က ပြန်လည်နာလန်ထမှုကို လိုလားတဲ့အတွက် အဲဒီခံစားချက်က ပိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် ပျောက်သွားတာကို သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
အနှိပ်ခန်းဆိုတော့ သူနဲ့ အတူရှိမယ် ဆိုတာ ငါတို့သိတယ်။ အသက်ဝင်စေပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေပါသည်။. ဘယ်အရာက ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး အောက်ဆီဂျင်ကို ထိုက်သင့်စေသလဲ။ ထို့ကြောင့် အားစိုက်ထုတ်ရန် မလိုအပ်သော်လည်း ၎င်းအတွက် သင့်လျော်သော ဦးခေါင်းဖြင့်သာ ခြေထောက်များကို ဖြတ်၍ သွေးလည်ပတ်မှု တိုးတက်လာခြင်းကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို မေ့လျော့သွားနိုင်သည်။ ဒါ ကြီးကျယ်တဲ့ အားသာချက် မဟုတ်ဘူးလား?
၎င်း၏ အဓိကအခြေခံမှာ နာကျင်မှုကို နှုတ်ဆက်နိုင်သည့် စွမ်းအားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရှိသောအခါတွင်လည်း ကျင့်သုံးခြင်း နှင့် မတူပါ။ အဆစ်အမြစ်ရောင်နာကဲ့သို့သော နာတာရှည်ရောဂါများ. သူ့တွင် နာကျင်မှုနှင့် တောင့်တင်းမှုသည် အဖြစ်များဆုံး လက္ခဏာအချို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို သက်သာစေရန်အတွက် နှိပ်နယ်ပေးသည့် သေနတ်ကဲ့သို့ လျင်မြန်ပြီး ထိရောက်မှုရှိသော နည်းလမ်းဖြင့် ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပေးခြင်းမျိုး မရှိပါ။
ဤကုသမှုအတွက် ပစ်မှတ်ဖြစ်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကြောင့် ကြွက်သားနာကျင်ခြင်းသာမကဘဲ ထို့အပြင် စာချုပ်စာတမ်းများသည်လည်း နေ့စဥ်အချိန်ဖြစ်သည်။ အချိန်များစွာ ထိုင်ဖြုန်းခြင်းကြောင့် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဝအရှိန်အဟုန်ကြောင့်၊ ပခုံး၊ သားအိမ်ခေါင်း သို့မဟုတ် lumbar ဧရိယာတွင် အဖုအထစ်များ ရှိနေတတ်ပါသည်။. ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းတို့အားလုံးအတွက်၊ ဤသေနတ်မှထွက်ရှိသောတုန်ခါမှုသည် အကောင်းဆုံးကုသမှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြွက်သားတင်းအားကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။
ခန္ဓာကိုယ် လှုပ်ရှားမှုကို ကောင်းမွန်စေသည်။
အချို့သောနေရာများတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အနှိပ်ခံခြင်းကို ကောင်းစွာသည်းမခံနိုင်သော်လည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောရလျှင် သေနတ်သည် အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး၏ ရွေ့လျားနိုင်မှုကို တိုးတက်စေသည်။. တင်းမာမှုအားလုံးကို ပြေလျော့စေခြင်းဖြင့်၊ တစ်ရှူးများတိုးတက်စေရန် အာဟာရအားလုံးကို စုပ်ယူမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွေ့လျားနိုင်မှုကို ပိုမိုသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် အလွန်လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေသည်။
သင့်ဘဝတွင် ပို၍ အပန်းဖြေပါ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် စာချုပ်စာတမ်းများကို အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားပါက၊ ၎င်းတို့ကိုထုတ်လုပ်ပေးသည့်အရာအားလုံးကို ဆက်လက်ပြောဆိုရမည်မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပြီး အထင်ရှားဆုံးပြဿနာတစ်ခုမှာ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နှိပ်နယ်ပေးခြင်းကြောင့်၊ ၎င်းတို့၏ စည်းချက်နှင့် ဖိအားများ ထွက်ပေါ်လာသည်။ ခန္ဓာကိုယ်က လျော့ရဲလာပြီး အပန်းဖြေမှုဟာ ကျွန်ုပ်တို့ဘ၀ထဲကို ဘယ်လိုရောက်လာမလဲဆိုတာကို သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ ဤအရာအားလုံးကို နှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုတက်ကြွပြီး စွမ်းအင်ပိုရလိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့် အနှိပ်သေနတ်ဖြင့် မတူညီသောကြွက်သားအုပ်စုများအတွက် ရည်ရွယ်ထားသည့် ကွဲပြားသောဦးခေါင်းများကို ကျေးဇူးတင်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လှပမှု » အနှိပ်သေနတ်၏အားသာချက်များ
နားကို ဘေးကင်းအောင် ဘယ်လိုသန့်ရှင်းမလဲ။
ဇန်န၀ါရီလ ရောင်းအားကို သတိရှိရှိ အသုံးချပါ။